फेसबुक प्रेमले युवती परिन् एउटा अचम्मको फन्दामा – YesKathmandu.com
मङ्गलबार ०७, असार २०७३
काठमाडौं । पढ्ने उमेरमा सामाजिक सञ्जालमा झुत्तिने किशोर÷किशोरीका लागि दुःखको खबर छ, हुँदाहुँदा अब बिहेका नाममा पनि ठगी सुरु भयो । प्रहरीको अपराध महाशाखामा परेको एउटा उजुरीले भन्छ, ‘ठिटाठिटी हो, फेसबुक हैन, बाबुआमाले भनेको मान ’
काठमाडौंमा बसेर अध्ययनसँगै रोजगारी गरिरहेकी शर्मिला (नाम परिवर्तन) को भेट सामाजिक सञ्जालमार्फत संगमसँग भयो । संगम आफू अध्ययनका सिलसिलामा बेलायतमा रहेको बताउँथे । वर्ष दिनअघि संगमले पठाएको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गरेपछि दुईको च्याट सुरु भयो । यो च्याट यति गहिरियो कि उनीहरू अब यसलाई वैवाहिक जीवनमा परिवर्तन गर्ने सुरसारमा थिए । यद्यपि, दुवैको भेट हालसम्म भएको थिएन ।
पmेसबुकबाट झांगिएको प्रेम यति गहिरिँदै गयो कि संगमले नै विवाहको प्रस्ताव ग¥यो । दुवै विवाह गर्न राजी पनि भए । कुराकानीकै सिलसिलामा, संगमले युकेबाट शर्मिलालाई गिफ्ट पठाइदिने बताए । प्रेमीको यस्तो प्रस्ताव सुनेसँगै उनी दंग मात्र परिनन्, आफ्नो पूरा ठेगाना म्यासेज गरिन् । संगमले पठाइदिन लागेको सामानको सूचीमा थियो, आइफोन सिक्स, गहना र केही मिठाई । ‘ल मैले सामान पार्सल गरेर पठाइदिएँ है,’ संगमले च्याटमा लेखेका थिए । प्रेमीको गिफ्ट पाउन शर्मिला आतुर थिइन् । दिन बित्यो, साता बित्यो तर गिफ्ट आएन । उताबाट संगमले भने गिफ्ट पाएनौ भनेर सोधी नै रहे । एक दिन उनको मोबाइलमा एक अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो । फोन भारतबाट एक युवकले गरेका थिए । युकेबाट तपाईंको साथीले पठाएको सामान इन्डियाको एयरपोर्टमा आएर अल्झिएको छ । केही समस्या प¥यो । कर तिर्नुपर्ने भयो । केही रकमको आवश्यकता छ’, उसले भन्यो । उनले त्यो कुरा संगमलाई सुनाइन् । प्रेमीले पठाएको गिफ्ट पाउने आश कसलाई पो नहोला र ? उनले फोनमा त्यो केटाले भनेझँै ३० हजार रूपैयाँ भारत पठाइन् ।
अबको केही दिनमा तपाईंका सामान तपार्इंको स्थानमा आइपुग्छ’, उसले भन्यो । तर, अहँ, सामान आएन । केही दिनपछि फेरि त्यही केटाले दोस्रो पटक फोन ग¥यो । फेरि उही समस्या देखायो र फेरि पनि २५ हजार रूपैयाँ माग्यो । गिफ्टको लोभमा उनले पैसाको जोहो गरी फेरि पैसा पठाइन् । तर, अहँ सामान अझै आएन ।
त्यसपछि झसंग हुने पालो आयो केटीको । आफू ठगिएको महसुस गर्दै टेकुस्थित महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखामा पुगिन् । महाशाखाका डिएसपी पशुपति राय भन्दै थिए यो ठगीको नयाँ शैली हो । उनी ठगिइन् । उनी मात्र होइन, पछिल्लो समय फेसबुकको माध्यमबाट यसरी ठगिएर उजुरी दिने क्रम बढेको छ ।’
जव म बलात्कृत महिला जस्तै हुन्छु
मलाई बलात्कार गर्नेलाई बुवा भनौ या पति ?
बम हत्याकाण्डका आरोपीलाई काठमाडौं ल्याइयो